Dabeecadda aan la aqbali karin: Faransiisku wuxuu dib u xusuustaa ergooyinkii u joogay Mareykanka iyo Australia
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » France Breaking News » Dabeecadda aan la aqbali karin: Faransiisku wuxuu dib u xusuustaa ergooyinkii u joogay Mareykanka iyo Australia
Wararka Australia • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • France Breaking News • Wararka Dowladda • News • Dadka • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka UK • Wararka Mareykanka
Ka tagista mashruuca badda hoosteeda ee Canberra iyo Paris ay ku heshiiyeen sanadkii 2016 wuxuu ka dhigan yahay 'habdhaqan aan la aqbali karin oo u dhexeeya xulafada iyo lamaanayaasha, cawaaqibkoodu taas oo saamaynaysa fikirka aan ka haysanno xulafadeenna, iskaashigeenna iyo muhiimadda Indo-Pacific ee Yurub , 'Ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda Faransiiska.
Dowladda Faransiiska ayaa safiiradeeda kala soo baxaysa Mareykanka iyo Australia.
Faransiisku wuxuu ku tilmaamay ka -reebitaankiisa isbahaysiga cusub ee AUKUS iyo luminta qandaraas weyn oo badda hoosteeda mara inay tahay midda dhabarka.
Madaxweynaha Faransiiska ayaa baajiyay xaflad xaflad ah oo ka dhici lahayd Safaaradda Faransiiska ee Washington, DC oo loo qorsheeyay sannad -guuradii 240 -aad ee dagaal taariikhi ah oo badda ah.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiiska Jean-Yves Le Drian ayaa maanta ku dhawaaqay in Faransiisku uu dib ugu yeedhay safiirradiisii ​​Maraykanka iyo Australia 'habdhaqanka aan la aqbali karin' ee Washington, London iyo Canberra ee ku aaddan heshiiska nukliyeerka badda hoostiisa kaas oo horseeday in la kansal gareeyo heshiiska badda hoosteeda ee Australia.
Sida laga soo xigtay Le Drian, go'aanka dib loogu yeerayo ergooyinka ayaa gabi ahaanba qiil looga dhigay 'cufnaanta gaarka ah' ee ku dhawaaqistii Sebtember 15 ee Australia, USA iyo UK.
“Codsi ka yimid Madaxweynaha Jamhuuriyadda, waxaan go’aansaday inaan isla markiiba dib ugu yeero Paris si aan wadatashi ugu sameeyo labada safiir ee Mareykanka iyo Australia,” Le Drian ayaa sidaas yidhi.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden, Raiisel wasaaraha Australia Scott Morrison iyo dhiggiisa Ingiriiska Boris Johnson ayaa ku dhawaaqay hindisaha 'AUKUS' munaasabad saddex geesood ah galabnimadii Arbacada. Udub-dhexaadka isbahaysigan cusub ee “dimoqraadiyadda badaha” waa mashruuca 18-ka bilood ah ee Canberra lagu siinayo maraakiibta quusta ee quwadda nukliyeerka ah laakiin sida caadiga ah hubaysan. Tani waxay Australia ka dhigaysaa oo keliya waddanka toddobaad ee adduunka ee ka hawlgala maraakiibta noocaas ah - iyo kan keliya ee aan haysan hubka nukliyeerka ee u gaarka ah.
Dawladda France Waxaa lagu soo waramayaa in heshiiska ay ka ogaadeen warbaahinno baaxad leh, halkii Washington ama Canberra si toos ah looga qaadan lahaa, in kasta oo mas'uuliyiinta Australia ay ku adkeysanayaan in ay si aad ah ugu caddeeyeen lamaanahooda in heshiiska Faransiiska iyo Australia la baajin karo.
Le Drian iyo Wasiirka Ciidamada Qalabka Sida Florence Parly ayaa soo saaray bayaan cadho leh oo ay kaga jawaabayaan furitaankii AUKUS, wasiirka arrimaha dibadduna markii dambe wuxuu ku tilmaamay ‘toorray dhabarka.
Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa baajiyay xaflad xaflad ah oo ka dhici lahayd safaaradda Faransiiska ee Washington, oo loo qorsheeyay sannad -guuradii 240 -aad ee dagaalkii badda ee gacan ka geystay ku guulaysiga dagaalkii madaxbannaanida ee Maraykanka.
Faransiiska kaliya lagama reebin isbahaysiga cusub, laakiin waxay luntay qandaraaskii ay Australia ku siin lahayd maraakiibta gujis ee sida caadiga ah loo isticmaalo. Dawladda Faransiisku waxay saamiga ugu badan ku leedahay Kooxda Naval Group, oo ka shaqaysay qandaraaska, oo qiimihiisu yahay ilaa 66 bilyan oo doolar.